Jurgen Klopp Oo Muujiyay Waxa Uu Tababarayaasha Kale Kaga Duwan Yahay Ee Ay Liverpool Kooxaha Kale Dheer Tahay Iyo Xogta Soo Laabashada Ciyaartoyda Reds. - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Muujiyay Waxa Uu Tababarayaasha Kale Kaga Duwan Yahay Ee Ay Liverpool Kooxaha Kale Dheer Tahay Iyo Xogta Soo Laabashada Ciyaartoyda Reds.
August 16, 2020 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka war bixiyay dareenka ay isaga u leedahay in ay ciyaartoyda kooxdiisa dib u midoobeen kadib laba todobaad oo ay fasaxa xagaaga ku kala maqnaayeen.
Jurgen Klopp ayaa muujiyay jacaylka iyo dareenka xoogan ee uu u hayo ciyaartoyda kooxdiisa iyo shaqaalihiisa tababarka isaga oo cadeeyay in farxad wayn ay u tahay in ay markale isku soo laabteen.
Jurgen Klopp ayaa muujiyay in jacaylka uu ka dhex abuuray ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxdiisa Liverpool uu yahay waxa ay dheer yihiin kooxaha kale ee ay xifiltamaan.
Kooxda Liverpool ayaa hadda ku sugan magaalada xuduuda Jarmalka iyo Austria ee Salzburg halkaas oo ay Reds ka bilawdeen diyaar garowga xili ciyaareedka cusub ee Premeir League oo bisha soo socota furmi doona.
Jurgen Klopp ayaa ku dooday in soo laabashada ciyaartoyda kooxdiisa ee tababarku ay ka mid tahay qaybaha ugu fiican ee shaqadiisa wuxuuna sheegay in ay dad fiicani ku xeeran yihiin.
Jurgen Klopp oo muujinaya dareenka farxadeed ee u dhexeeya isaga iyo kooxdiisa ayaa yidhi: “Daacad ahaantii taasi waa qaybta ugu fiican ee shaqadayda. Aniga waxaa iagu xeeran dad xaqiiqdii, xaqiiqdii aan jeclahay”.
Klopp oo sharaxaya micnahay ay isaga u leedahay in ay ciyaartoyda kooxdiisa isku soo laabteen laba todobaad kadib fasixii xagaaga ayaa yidhi: “Sidaa daraadeed, waxay la mid tahay in aan markale la kulmayo saaxiibo haddii ay ciyaartoyda tahay, haddii ay idinka tahay (Warbaahinta Liverpool), waa wax fiican in aan soo laabano oo aan samayno waxa aan xaqiiqdii ku fiicanahay”.
Klopp ayaa muujiyay arin kale oo layaableh wuxuuna ku dooday in haddii fasaxa xagaagu uu noqon lahaa hal todobaad oo kaliya in aanu wax dhibaato ah ku qabeen wuxuuna yidhi: “Haddii aan boqolkiiba boqol daacad noqdo, anigu dhibaato wayn kumaan qabeen haddii uu fasaxu noqon lahaa hal todobaad ama sidaas oo kale, laakiin xaqiiqdii wax dhibaato ahi ma jirto”.
” Markii aan banaanka fasaxa u baxay isla markaana aan halkan soo gaadhay, waxa uu waqtigani la mid ahaa sidii markastaba ee tan iyo intii aan halkan joogay- kaliya waa mid qurux badan oo cajiib ah in aad markale dadka la kulantaa’ ayuu Klopp hadalkiisa raaciyay.
Klopp oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Gabi ahaanba waan ku faraxsanahay, waxayna markastaba la mid tahay sidii aan guriga ku soo laabtay ee xataa waqtiga aanan guriga joogin”.
Dhinaca kale Klopp oo ka hadlaya goobta ay tababarka kooxdiisu ku qaadanayso ee magaalada salzburg ee dalka Austria ayaa yidhi: “Sidaa daraadeed, waxaanu oognaa deegaan nabadgalyo ah, waxay u muuqataa in xaqiiqdii wax walba la diyaariyay”.
Ciyaartoyda Liverpool ayaa haddaba bilawday tababarka ay iskugu diyaarinayaan xili ciyaareedka cusub ee Premier League oo furmi doona September 12 balse waxay ka hor ciyaari doonaan finalka Community Sheild oo ay Wembley Stadium ku wajihi doonaan Arsenal iyada oo la fahansan yahay in Klopp uu caruur soo safi doono.